माओवादी नेता एकाएक किन पुगे एमालेको दैलोमा? यस्तो छ उथलपुथल पार्ने प्रस्ताव – Setosurya
माओवादी नेता एकाएक किन पुगे एमालेको दैलोमा? यस्तो छ उथलपुथल पार्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने देखिएपनि शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेको सम्पर्कमा पुगेका छन् ।
मधेसमा दोस्रो शक्ति बन्ने लक्षण देखाइरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा गएको माओवादी टोलीले एमाले नेताहरुसँग आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावबारे गम्भीर छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
टोपबहादुर रायमाझीका साथमा माओवादी नेताहरु शक्ति बस्नेत, अग्नी सापकोटा लगायत नेताहरु थिए । उनीहरुले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ ।
‘आगामी चुनावमा हामीलाई जित्नको लागि मद्दत गर्नुस्,’ माओवादी नेताले एमालेसँग राखेको प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘प्रादेशिक चुनावमा माओवादी जित्ने ठाउँमा एमालेबाट कमजोर उम्मेदवार उठाउनुस् । हामी कांग्रेसलाई हराउछौं ।’
माओवादी नेताहरुको यस्तो प्रस्तावपछि एमाले नेताहरु आश्चर्यमा परेका थिए । उनीहरुले पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने आश्वासन दिएका थिए । यसैबीच माओवादी यस्तो प्रस्ताव ल्याएकै बेला आजबाट एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि सुरु भएको छ । बैठकमा माओवादी प्रस्तावबारे छलफल हुने बताइएको छ । नेपाल पानाबाट
६४ तहको नतिजा सार्वजनिक, कसले कति जिते ? (सूचीसहित)
देउबाले यी ५ कदम चाले भने के होला नेपालमा ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
यी हुन् एमालेले टुंगाएका ४३ उम्मेदवारहरु : नवराज सिलवालदेखि बृजेश गुप्तासम्म (सूचीसहित)
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई कसले दिए घरभाडा ?
कहाँ को को विजयी भए ? हेर्नुहोस